Xisaabinta Ilkaha Neefka iyo Da’da |
Ilkaha faras dadiisa tahay 7 illaa 15 jir
Ahmiyyada laga leeyahay in la xisaabiyo lana ogaado tirada ay yihiin ilkaha neefku waa in si fudud markiiba loo ogaan karo da’da uu jiro neefkaasi.
Taas oo ka caawinaysa mulkiilaha xereda xoolaha in uu si fudud u maamulo xoolaha isaga oo hadba ku xisaabtamaya jiilka is leeg da’ ahaan, isla markaana waxa ay tani faa’ido dheeraad ah siinaysaa wakhtiyada uu ku jiro mulkiiluhu qorshaynta tarminta xoolaha, suuq-gaynta iyo u kala soocidda hoyga ama xerada xoolaha.
Qaybaha Ilkaha – Ilkaha waxa loo kala qaybiyaa guud ahaan laba qaybood iyada oo la eegaayo xagga d’da xoolaha
· Ilkaha wakhtiga caano-nuugga (temporary teeth): ilkahani waxa ay xoolaha u soo baxaan marka uu neefku dhasho ka dib, waxaana ay adeegsadaan muddada ay jaqayaan caanaha hooyada, waxaana loo yaqaanaa ilkaha ku meel-gaadhka ah, xoolaha aynu dhaqano waxa ay yeeshaan muddadaas 20 ilkood.
· Ilkaha caadiga ah/joogtada ah (permanent teeth): ilkahani waa ilkaha caadiga ah ee ay xooluhu u adeegsadaan daaqa, waxa ay u soo baxaan ilkahani neefka wakhtiga uu ababo ee uu bilaabo daaqa, guud ahaan tirada ilkahani waa 32 ilkood, marka aynu ka hadlayno xoolaha aynu dhaqano ( idaha, riyaha, lo’da iyo geela).
Mar kale iyada oo ilka la abla-ablaynayo ama la kala qaybinayo waxa loo eegaa meelaha ay kaga yaalaan ciridka neefka, waxaana loo kala tilmaamaa sidan hoose.
Da’da Adhiga (Idaha, Riyaha)
Marka la xisaabinaayo da’da uu jiray neefka adhiga ahi, waxa laga qiyaas qaataa inta badan ilkaha neefka, haddaba si aynu u hubino taas waxa aynu qaadan doonaa lix qaacido oo guud kuwaas oo loo adeegsado in lagu ogaado da’da neefka.
– Neefku haddii aanu lahayn wax ilko ah oo caadiya ama ilka wakhtiga daaqa u soo baxa xoolaha , da’diisu way ka yar tahay hal-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay laba-ilkood oo hoose, Da’diisu waa hal-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay afar-ilkood oo hoose, Da’diisu waa laba-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay lix-ilkood oo hoose, Da’diisu waa saddex-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay siddeed-ilkood oo hoose, Da’diisu waa afar-sanno.
– Sidii aynu hore u soo sheegnay tirada ugu badan ee neefku ku yeesho daanka hoose waa siddeed ilkood (oo aan gaws ahayn) markaas neefka ma jiraan 8 fool-hoosaad wax ka badan oo laga filan karaa, sidaas daraadeed neef kasta oo afar-sanno ka wayn waxa loo tix gelinayaa in uu yahay neef wayn.
Fiiro gaar ah: Ilkaha caadiga ahi way ka waawayn yihiin, kana adag yihiin ilkaha yar-yar ee wakhtiga caano-nuugga neefka lagu arko.
Lo’du way ka duwan tahay adhiga marka loo eego xisaabinta ilkaha xagga da’da.
– Neefka lo’da ahi haddii aanu lahayn wax ilko ah oo caadi ah ama ilkaha wakhtiga daaqa u soo baxa xoolaha , da’diisu way ka yar tahay laba-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay laba-ilkood oo hoose, Da’diisu waxa ay u dhaxaysaa laba-sanno ilaa saddex-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay afar-ilkood oo hoose, Da’diisu waa saddex-sanno.
– Neefku haddii uu leeyahay lix-ilkood oo hoose, Da’diisu waa saddex-sanno iyo badh.
– Sidii aynu hore u soo sheegnay tirada ugu badan ee neefku ku yeesho daanka hoose waa siddeed ilkood (oo aan gaws ahayn) markaas neefka ma jiraan 8 fool-hoosaad wax ka badan oo laga filan karaa, sidaas daraadeed neef kasta oo afar-sanno ka wayn waxa loo tixgelinayaa in uu yahay neef wayn.
Marka aynu ka hadlayno geela maaha wax fudud in la xisaabiyo da’diisa, maxaa yeelay waxa ay noolaan karaan wakhti aad u dheer, haddaba nirgaha yaryari waxa ay leeyihiin 22 ilkood wakhtiga caano-nuugga, geela waawaynina waxa uu leeyahay 32 ilkood oo caadi ah.
Tags: Xisaabinta Ilkaha Neefka iyo Da’da
Next post Qaab-dhismeedka Jidhka iyo Daaqa Xoolaha
Previous post Baadhitaanka Bukaanka ee Caafimaadka Xoolalaha